मेरो हात माग्न कहिले आउँछौ आयुष्मान ? « Pariwartan Khabar
12 February, 2018 8:37 am
प्रियंका कार्की : हाइ…मैले एकछिन कुराएँ है, आई एम सो सरी ।
आयुष्मान : गार्लिक क्यूकम्बर…योर फेबरेट ।
प्रियंका : यस, माइ फेबरेट अनि…
आयुष्मान : हट एन्ड सावर सुप…तिमीलाई मन पर्छ नि ? अनि त्यस्तै कट्याक–कुटुक मगाएको छु ।
प्रियंका : हो नि…अहिले त्यहाँ हाम्रो समरको जस्तो मौसम छ । झन्डै ३० डिग्री छ अहिले त्यहाँको तापक्रम । काठमाडौंको चिसोबाट दुई–चार दिन गर्मी ठाउँमा पुग्न पाउने कुराले पनि म एक्सटाइटेड छु ।
आयुष्मान : हुन त त्यहाँ घुम्नका लागि, गर्नका लागि धेरै कुरा छन्, तर हामीसँग चार–पाँच दिन मात्र समय छ, त्यसैले हामी त्यहाँका दुईवटा सुन्दर सहर घुम्नेछौं । म आफ्नो यूुट्युब च्यानलका लागि केही भिडियोग्राफी पनि गर्नेछु । त्यसका लागि क्यामेरा बोक्न बिर्सनेछैन । अँ…तिमी मेरा लागि क्यामेरा पर्सनचाहिं बनिदेऊ है प्लिज…
प्रियंका : येइ….म तिम्रो क्यामरा पर्सन…
आयुष्मान : हो नि… हामी जहाँ–जहाँ पुग्छौं, ती सबै ठाउँलाई भिज्युअलमा क्याप्चर गर्ने अनि राम्रो भिडियो बनाएर युट्युबमा राख्ने है ।
आयुष्मान : मैले तिमीलाई रातो बंगला स्कुलमा पहिलो पटक भेटेको भन्दा तिमी विश्वास गर्दिनौ । तिमी एउटा कुनामा बसेर रोइरहेकी थियौ, मैले आएर नरुनु भनेर सम्झाएको थिएँ, रिमेम्बर…. ?
प्रियंका : हो नि…त्यो बेला म्यासेजबाटै कुराकानी हुन्थ्यो । तिमीले मलाई त्यो फेसन शोको निम्ता पनि एसएमएसबाटै दिएका थियौ, तर म जाने कि नजाने भनेर दोधारमा थिएँ । एक जना बहिनी मलाई लिन घरमै आएपछि म उक्त शोमा पुगेकी थिएँ ।
आयुष्मान : हो, हो…मलाई पनि त्यही रात नै फिल भयो, हामी एक–अर्कालाई साँच्चिकै मन पराउँदा रहेछौं, तर भन्ने हिम्मत पुगिरहेको थिएन ।
आयुष्मान : ओ हो…त्यो रात म कसरी बिर्सूं ? बिहान पाँच बजेपछि घर पुग्दा ममी उठिसक्नु भएको रहेछ । ममीलाई मेरो शो थियो, तिमी र मसँगै थियौं भन्ने कुरा थाहा थियो । मैले तिमीलाई अलि–अलि मन पराउन थालेको कुरा पनि ममीलाई थाहा थियो । उहाँले बेडरुमबाटै ‘आयुष’ भनेर बोलाउनुभयो र के भयो भनेर सोध्नुभयो । मैले अचानक ‘लभ पर्‍यो’ भन्दिएँछु । ममी मेरो कुरा सुनेर ‘थाहा थियो, थाहा थियो, यहाँ आउ’ भनेर कराउनु भयो । ममी म भन्दा बढी एक्साइडेट हुनुहुन्थ्यो, छोराको लभ परेको खबर सुन्न । उहाँ के–के भयो, के–के गर्‍यो, कसरी लभ परेको कुरा थाहा भयो भनेर खोजीनीति गर्न थाल्नुभयो ।
प्रियंका : हैन…पहिले इन्गेजमेन्ट गर्ने अनि त्यसको एक वर्षपछि विवाह गरौंला नि हुन्न ?
प्रियंका : त्यो दिन मेरो घर आऊ । जाडो अझै टरेको छैन… म मकै भुटेर राख्छु । आइसक्रिम, चकलेट आदि पनि ल्याउँछु । तिमी आएपछि दुवै जना सिरकमा गुटुमुटु भएर मकै, आइसक्रिम, चकलेट आदि खाँदै दिनभरि कुनै राम्रो रोमान्टिक फिल्म हेरौंला ।
आयुष्मान : आहा…कस्तो रमाइलो । भ्यालेन्टाइन डे आउन अब कति बाँकी छ ?
प्रियंका : अर्को हप्ता त हो नि ! (साप्ताहिक)